UnlockSound7: ampandehano ny feon'ny fanidiana sy ny famohana ny iOS6 (Cydia) | Vaovao IPhone
UnlockSound7: ampandehano ny hidin-trano sy hamaha ny feon'ny iOS 6 (Cydia)
Raha mbola manana fitaovana miaraka amin'ny iOS 6 ianao dia andramo manidy sy mamoha ny terminal anao amin'ny habetsaky ny haavony; Ho hitanao fa ny feo henonao no henointsika hatramin'izay tamin'ny iOS rehetra. Ankehitriny, raha manana fitaovana miaraka amin'ny iOS 7 ianao dia manaova fitsapana mitovy ary ho hitanao fa tsy misy feo re. Ary izay? Ahoana no ahatongavana amin'izany? Apple, ny feoko mamoha! Ho ahy manokana, iray amin'ireo zavatra nampiavaka ny iOS tamin'ny rafitra fiasa hafa dia io feo mampiavaka azy io; tandremo anefa! Raha manana fitaovana misy jailbreak sy iOS 7 ianao ary te-hamerina ilay feo mihidy sy mamoha izay nanjo anay tao amin'ny iOS 6 dia tsy mila mampidina ilay tweak antsoina hoe ianao fotsiny ianao. UnlockSound7 avy any Cydia. Te hahafantatra ny fiasan'ity tweak vaovao misy maimaim-poana ao Cydia ity ve ianao? Tohizo ny famakiana!
Miverena amin'ny hidin-trano iOS 6 ary sokafy ny feo miaraka amin'ny UnlockSound7
Ny zavatra voalohany ilaintsika dia ny fametrahana ny tweak apetraka amin'ny fitaovantsika, noho izany, midira Cydia ary ampidiro ny fizarana "Search" ary soraty ny anaran'ilay tweak: "UnlockSound7". Tsy mila mametraka repo akory ianao satria efa napetraka iray avy ao amin'ny orinasa io: BigBoss. Hangataka anao i Cydia hamerina mamerina ny fitaovana ampiasainao, ataovy izany ary manohiza mamaky.
Raha vao nametraka UnlockSound7, ampidiro ny Fikirakira ny iPad anao dia ho hitanao fa manana safidy vaovao ianao izay mitondra ny anaran'ilay fanovana izay vao napetraka.
Raha miditra ao amin'ity menio ity isika dia hanana masontsivana vitsivitsy izay ho liana amin'ny fanovana:
Alefa: Raha mampihetsika ity bokotra ity ianao dia hiasa ilay tweak ary hohenoinay isaky ny manakana na manaisotra ny feo efa azonay tao amin'ny iOS 6 teo aloha izahay.
feo: Hanana safidy roa isika. Raha mifidy «IOS mahazatra»Hohenointsika ny feo nanananay tao amin'ny iOS 6. Raha te hamboarina manokana ny hidy na hamaha ny feo isika dia hisafidy ny safidy:«Custom«; fa tsy maintsy manova ny fisie «unlock.caf»Amin'ny alàlan'ny mpikaroka rakitra.
Volume: Ovao ny habetsaky ny feon'ny feo izay hataon'i UnlockSound7 isaky ny manidy na mamoha ny terminal isika.
Raha vantany vao nanamboatra ianao UnlockSound7 araka izay itiavanao azy dia andramo amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra herinaratra hanidiana ny terminal anao.
Fanazavana fanampiny - P0sixspwn, ny Jailbreak mankany amin'ny iOS 6 ho an'ny Windows efa misy izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » UnlockSound7: ampandehano ny hidin-trano sy hamaha ny feon'ny iOS 6 (Cydia)
Convergance dia mahasoa ny efijery hidin-trano. Ho avy tsy ho ela any Cydia.
PAC-MAN, afaka tononina anarana ho fampiharana amin'ny herinandro